El Al Israel Airlines inotangisa nendege yakananga kuCasablanca neMarrakesh
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose » Israel Breaking News » El Al Israel Airlines inotangisa nendege yakananga kuCasablanca neMarrakesh
Airlines • nhandare yendege • avhiyesheni • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Bhizinesi Kufamba • Israel Breaking News • Marokero Kuputsa Nhau • nhau • Kutarisirwa • ushanyi • Tourism Kutaura • kutakura • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Zvakavanzika Zvokufamba • Kufamba Wire Nhau • Akasiyana Nhau
El Al kuvhurwa kwenzira dzakananga kuenda kuMorocco kunotevera chibvumirano chechimiro chakasainwa pakati penyika mbiri muna Zvita 2020.
El Al anomhanyira kuMorocco nhasi.
Israir ichatanga nendege dzakananga pakati peTel Aviv neMarrakesh musi waChikunguru 25.
Arkia ichatanga basa kubva kuTel Aviv kuenda kuMarrakesh musi waAugust 3
YeIsrael inomira nendege inotakura El Al Israel Airlines yazivisa nhasi kuvhurwa kwenzira mbiri dzakananga dzendege kuenda kuMorocco, yekutanga yerudzi rwavo pakati penyika mbiri.
El Al's Israel-Morocco sevhisi ichatanga muna Chikunguru 25.
El Al Israel Airlines achafamba nendege pakati pevaIsraeri Ben Gurion International Airport nemaguta eMoroccan eCasablanca neMarrakesh.
Ndege iyi yakati ndege dzinoenda kuMorocco dzinotora maawa mashanu kudivi rimwe nerimwe.
"Moroko inopa mubatanidzwa wekukunda wekufema kwenzvimbo dzerenje, maguta enhoroondo, zvivakwa zvinoyevedza, misika ine mavara, chikafu chakanaka uye mutsa wekugamuchira vaeni," akadaro El Al.
Zvakare muna Chikunguru 25, yechipiri ndege huru muIsrael Israir ichatanga nendege dzakananga pakati peTel Aviv neMarrakesh. Ndege yechitatu pakukura yeIsrael Arkia ichavhura nzira imwechete muna Nyamavhuvhu 3.